Ukuhlulwa kube umuzwa omuhle ngaphambi komdlalo wethu olandelayo” kusho umqeqeshi we-Swallows | Scrolla Izindaba
Ukuhlulwa kube umuzwa omuhle ngaphambi komdlalo wethu olandelayo” kusho umqeqeshi we-Swallows
Umqeqeshi we-Swallows FC uBrandon Truter ubheka ukwehlulwa kwakhe yi-TS Galaxy ngamagoli amabili kwelilodwa kuyindlela enhle eqenjini lakhe.
Ngemuva kokuhlulwa kwe-Swallows, i-Mamelodi Sundowns yilona kuphela iqembu kwi-DStv Premiership elibambitha ukunqoba lo mkhankaso.
Sekucishe kube unyaka iZinyoni zagcina ukuhlulwa emdlalweni, futhi ekugcineni umdlalo wazo wokungashaywa emidlalweni engama-25 ifike ekugcineni.
“Yebo, mhlampe kubika into enhle. Ngiqonde ukuthi, sekuzocishe kube unyaka impela selokhu sagcina ukuhlulwa emdlalweni,” kusho uTruter.
“Sibheke ukugcina ifomu enhle emidlalweni yethu elandelayo ne-TTM [i-Tshakhuma Tsha Madzivhandila], kodwa ngiyaziqhenya kakhulu ngomdlalo wabafana. Ngidinga nje ukukugcizelela lokho ngoba badlale kahle impela futhi angikwazi ukubasola.”
Lo mqeqeshi onqobe isicoco sokuba ngumqeqeshi wenyanga amahlandla amabili (ngoZibandlela nangoMasingana) uthi ucabanga ukuthi abadlali bakhe sebezodlala ngaphandle kokwesaba ukuthi bazolahlekelwa ngumdlalo wabo olandelayo.
UTruter uthi bazobe befuna impindiselo emdlalweni wabo neqembu elizinze e-Limpopo, elabakhipha ku-Nedbank Cup. Kuthathwe isinqumo sokuhlulwa ngamagoli amane kwamathathu kumaphenathi, ngemuva kokudlala ngokulingana ngamagoli amabili emdlalweni othathe emizuzwini eyi-120.
Selokhu i-TTM yaletha usihlalo omusha uDkt u-Abram Sello, izinto kubonakala ziyahamba ngendlela yabo kanti imiphumela iyabonakala.
I-Swallows ne-TTM zizoqhudelana ngeSonto ntambama e-Dobsonville Stadium, e-Soweto.
Khonamanjalo, amagoli bekuyinto eyindlala emidlalweni yangoLwesithathu naphakathi neviki ku-DStv Premiership.
I-Chippa United, ekhiphe i-Cape Town City kowe-Nedbank Cup ngeSonto eledlule, idlale ngokulingana ngaphandle kokuthola amagoli enkundleni yezemidlalo i-Sisa Dukashe.
Emdlalweni ojabulise kakhulu, i-Lamontville Golden Arrows nayo idlale ngokulingana ngaphandle kokuthola amagoli ne-Baroka FC – yize bekukhona umnyakazo omkhulu nokuqina emdlalweni.
Umthombo wesithombe: @KCMGlobalSports